ဦးဇော်ဌေး၏ ပြောကြားချက်သည် သမ္မတကို စစ်မက်လိုလားသူ ဖြစ်စေသည့် သဘောသက်ရောက်နေဟု ဒေါက်တာအေး - Yangon Media Group
ဦးဇော်ဌေး၏ ပြောကြားချက်သည် သမ္မတကို စစ်မက်လိုလားသူ ဖြစ်စေသည့် သဘောသက်ရောက်နေဟု ဒေါက်တာအေး
ရခိုင်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးဇော်ဌေး ပြောကြားချက်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတကို စစ် မက်လိုလားသူဖြစ်စေသည့် သဘောသက် ရောက်နေဟု နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်မှု နှင့် အမှုရင်ဆိုင်လျက်ရှိသည့် ဒေါက်တာ အေးမောင်က ပြောဆိုသည်။ ဒေါက်တာအေးမောင်အနေဖြင့် ဇန်န ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်လာစဉ် ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ကာလုံခေါ်ပါလို့ ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ ကာလုံသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရ နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကာကွယ်ရေး နဲ့ လုံခြုံရေးကို ပြန်သုံးသပ်တဲ့ကာလမှာကို ကိုဇော်ဌေးက ပြောတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြီးက စစ်မက်လိုလားတဲ့ စစ်ဝါဒီသဘော ပြောသွားတာရှိတယ်။ သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ သမ္မတကြီးက ဖြန်ဖြေတာပဲဖြစ်ရမယ်။ တပ်မတော်၊ တိုင်း ရင်းသား အားလုံးပါတယ်။ အားလုံးက မျှမျှ တတ ပြည်ထောင်စုကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ပြန် ပြီးတော့ တည်ဆောက်မှသာလျှင် ကျွန်တော် တို့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့လိုတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ် ဖွဲ့ကင်းစခန်းလေးခုကို AA မှ ဝင်ရောက်တိုက် ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ AA ကို သောင်းကျန်းသူနှိမ်နင်းရေး စစ်ဆင်ရေးပြု လုပ်ရန်၊ ရဟတ်ယာဉ်အသုံးပြုနှိမ်နင်းရန်နှင့် တပ်အင်အားတိုးချဲ့ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တပ်မတော်ကို ညွှန်ကြားထားသည်ဟု ဦးဇော် ဌေးက ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံတော်ကြီးကို စစ်မဲ့ ဖြစ်သွားစေချင်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ၇၁ နှစ် ဆိုတာ ၈ ဂဏန်း ကျတယ်ဗျ။ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုပြီ။ အမုန်းလှိုင်းတွေဖြတ်နေတယ်။ အဲဒီတိုင်းရင်း သားတွေကနေ အမုန်းလှိုင်းတွေဟာ မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းရေးကို ရောက်သွားမှာကို အင်မတန်ကိုစိုးတယ်”ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် စာ ရေးဆရာ ဝေဟင်အောင်တို့၏ အမှုနှစ်ခုစလုံး ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန်အတွက် လျှောက်လဲချက်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်မှလည်း ပယ်ချခဲ့သည်။ ”ကျွန်တော်တို့က သံသယတောင် ဝင် တယ်ဗျ။ တရားရေးမဏ္ဍိုင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြီးပြောတာနဲ့ အောက်မှာ တခြားစီများလား ဆိုတာလေ။ ရခိုင်လူထု သံသယမဖြစ်ဖို့လို တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုဖမ်းထားတာက ရခိုင် တစ်ပြည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး ကို ဖမ်းထားတယ်လို့ မှတ်တယ်ဆိုရင် အမုန်း တရားလှိုင်းတစ်ခုက မမြင်ရတဲ့ နှလုံးသားက တစ်ဆင့် သွားနေပြီ။ အဲဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်” ဟု ယင်းက ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
ထပ်မံ၍ ရုံးချိန်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်သို့ ခေါ်ဆိုထားပြီး တရားလွှတ်တော်မှလည်း ပယ်ချခဲ့မှုကြောင့် ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ သည် နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်မှု ပုဒ်မ ၁၂၂၊ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ)နှင့် ဆက်လက်အမှုရင်ဆိုင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်စနိုင်ရန် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့သုံးဖွဲ့နှင့် အစိုးရကိုယ်စာ??
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု စံချိန်တင်မြင့်မား
စီမံ/ဘဏ္ဍာ ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သမ္မတနှင့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌမျာ?
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ မရှိတော့ပါက တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးမှစွန့်ခွာရန် ??